साफ च्याम्पियनसिपः पहिलो हाफ नसकिँदै बंगलादेशविरुद्ध नेपालको ३ गोल ! (LIVE ) - Everest Dainik - News from Nepal
साफ च्याम्पियनसिपः पहिलो हाफ नसकिँदै बंगलादेशविरुद्ध नेपालको ३ गोल ! (LIVE )
विराटनगर, चैत २ । साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलअन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा बंगलादेशविरुद्धको खेलमा नेपालले शानदार प्रदर्शन गरेको छ । नेपालले ३० मिनेट नसकिदै ३ गोल गर्न सफल भएको छ ।
खेलको पहिलो ६ मिनेटमा बङ्गलादेशले आत्मघाति गोल गरेपछि नेपालको अग्रता सुरु भएको हो । मनमायाँ लिम्बुले प्रहार गरेको बलमा बङ्गलादेशी खेलाडी मसुरा प्रबिनको हेडमा आत्माघाती गोलले नेपाललाई १-० को अग्रता दिलायो ।
याे पनि पढ्नुस नेपाल २–० ले अगाडि
नेपाली टिममा आज एक जना खेलाडी परिवर्तन गरिएको छ । विराटनगरको शहिद रंगशालामा केहीबेरमा सुरु हुने खेलमा नेपालले डिफेन्समा खेलाडी परिवर्तन गरेको हो । डिफेन्डर अमृता जैशीको स्थानमा पुनम जर्घामगरले स्थान बनाएकी हुन् ।
दुबै टिम जित हात पार्दै समूह विजेता बन्ने लक्ष्यमा छन् । एक खेल अगावै सेमिफाइनल पुगेका नेपाल र बंगलादेश सेमिफाइनलमा दबाब मुक्त गर्न आजको खेल जित्नै पर्ने दबाबमा छन् ।
दुबै खेलमा भुटान पराजित भएपछि यी नेपाल र बंगलादेश एक खेलअघि नै सेमिफाइनल पुगेको हो । आजको खेलमा नेपालले बंगलादेशसँग बराबरी खेलेमा पनि समूह विजेता बन्ने छ ।
ट्याग्स: Nepal vs Bangladesh